Zvirwere zveMhuka Fekitori - China Zvirwere zvezvipfuyo Vagadziri, Vatengesi
Pseudorabies virus (gB) PCR yekuona kit
E.coli O157: H7 PCR yekuona kit
MA-6000 Yechokwadi Nguva PCR Sisitimu
CHK-800 otomatiki nucleic acid yakatora
CHK-16A Otomatiki Nucleic Acid Kubvisa System
UF-300 Chaiyo-nguva PCR Sisitimu Flyer v1.0
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent PCR nzira yekuona iyo RNA yePseudorabies virus (gB gene) (PRV) muzvinhu zvezvirwere zvakadai sematoni, lymph node uye spleen uye mvura yezvirwere zvinhu zvakadai sejekiseni neropa renguruve.
Africa swine fever virus PCR yekuona kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent PCR nzira yekuona iyo DNA ye Africa swine fever virus (ASFV) mune zvinyama chirwere zvinhu zvakaita sematoni, lymph node uye spleen uye mvura yechirwere zvinhu senge jekiseni uye ropa renguruve.
Nguruve fever virus RT-PCR Detection Kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent RT-PCR nzira yekuona iyo RNA yeSwine fever virus (CSFV) mune matishu echirwere zvinhu zvakaita sematoni, lymph node uye spleen uye mvura yechirwere zvinhu senge jekiseni uye ropa renguruve.
Tsoka-uye-muromo muromo hutachiona RT-PCR Detection Kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent RT-PCR nzira yekuona iyo RNA yechirwere chetsoka-uye-muromo (CSFV) muzvinhu zvezvirwere zvakadai sematoni, lymph nodes uye spleen uye mvura yechirwere zvinhu zvakadai sejekiseni neropa renguruve.
Porcine Circovirus mhando 2 PCR yekuona kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent PCR nzira yekuona iyo RNA yePorcine circovirus yerudzi rwechipiri (PCV2) mune zvinyama chirwere zvinhu zvakaita sematoni, lymph node uye spleen uye mvura yechirwere zvinhu zvakadai sejekiseni uye ropa re.
Nguruve denda remanyoka hutachiona RT-PCR yekuona kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent RT-PCR nzira yekuona iyo RNA yePorcine denda remanyoka hutachiona (PEDV) muzvinhu zvezvirwere zvakadai sematoni, lymph node uye spleen uye zvinhu zvechirwere zvemvura senge jekiseni uye ropa renguruve.
Nguruve yekubereka uye yekufema syndrome hutachiona RT-PCR Detection Kit
Iyi kit inoshandisa chaiyo-nguva fluorescent RT-PCR nzira yekuona iyo RNA yePorcine yekuberekera uye yekufema chirwere chetachiona nucleic acid yekuona kit (PRRSV) mune zvinyama chirwere zvinhu zvakaita sematoni, lymph node uye spleen uye mvura hosha zvinhu zvakadai sejekiseni neropa yenguruve.